အိပ်မက်ကောင်းကင်: ရင်းတွင်းဖြစ် ၀တ္တုရှည်
Showing posts with label ရင်းတွင်းဖြစ် ၀တ္တုရှည်. Show all posts
Labels: ရင်းတွင်းဖြစ် ၀တ္တုရှည် Posted by အိပ်မက်ကောင်းကင် Thursday, February 6, 2014
ကျွန်တော်ဘလော့ပိုစ့်တွေကိုမတင်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ ။ ဘလော့ဂါ ညီအစ်ကို မောင်နှမ တွေဆီ
ကိုလည်း မလည်ဖြစ်တာအတော်ကြာပါပြီ ။ အကုန်လုံးကို သတိရပါတယ် ။ အခုတစ်လောမအားတော့တာကြောင့်လည်း အင်တာနက်ကိုသိပ်မသုံးဖြစ်တော့တာပါ ။ စာရေးတာ ၀ါသနာ ပါတော့ အလုပ်မှာ အားတဲ့အချိန်တွေဆို စာထိုင်ရေးနေလိုက်တယ် ။ သည်လိုနဲ့ပဲ ဇာတ်လမ်း
တစ်ပုဒ်ပြီး သွားခဲ့ပါပြီ ။ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို ခံစားပြီး ဝေဖန်ပေးသွားကြပါဦးနော် ......
အပြာရောင်သန်းနေသောကောင်ကင်ကြီးကို ဘယ်သူတွေက ဆေးရောင်ခြယ်ခဲ့မှန်းမသိသလို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရွှေ့လျားနေတဲ့ တိမ်စိုင်လေးတွေကိုလည်း ဘယ်သူတွေက
ဖန်တီးခဲ့မှန်း ကျွန်တော်မသိပါ ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ထိုအလှအပလေးများထဲမှာ
ကျွန်တော်၏ စိတ်များ လွှင့်မျှောနေမိသည်ပင် ။ မြူနှင်းများမှာလည်း
ဆောင်းလေညင်းတို့နှင့်အတူ လေထုထဲတွင် ပျံဝဲကာ ကျွန်တော်တို့ရွာကလေးကို
လွမ်းခြုံထားပေသည် ။ ရွာကလေးဆိုပေမဲ့ မြို့မကျ တောမကလေးပါ ။
အိမ်ပေါ်ထပ်ပြတင်းပေါက်လေးမှနေ၍ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ရွာကလေး၏
အလှထဲတွင် မည်မျှပင်နှစ်မျှောသွားသည်ကိုမသိလိုက် ။ အေးစက်သောလေညင်းများ မျက်နှာပြင်
ပေါ်သို့တိုးဝှေ့လာမှ အသိပြန်ဝင်လာတော့သည် ။ အလုပ်နားရက်လည်းဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ပြေလက်ပျောက် ရွာကလေး၏ အလှကိုငေးမောနေမိခြင်းဖြစ်သည် ။
---------------------------------- ။ ။ --------------------------------------
ကျွန်တော်မှာ ဘွဲရပြီးခါစလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရုံးတစ်ရုံးမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည် ။
မိဘနှစ်ပါးမှာလည်းဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်သောကြောင့် တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်စွာ
တစ်ကောင်ကြွက်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေရခြင်းဖြစ်သည် ။ အလုပ်နားရက်များတွင်
၀င်းဇော်နှင့်အတူ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် အချိန်ဖြုန်းနေကြပင် ။ ယခုလည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့သွားရန် အနွေးထည်ထပ် ၍အိမ်မှထွက်လာခဲ့လိုက်သည် ။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့ဝင်းဇော်ပင်မရောက်သေးပေ။ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ စားပွဲထိုးကောင်လေးမှာ ကျွန်တော်သောက်နေကျ လက်ဖက်ရည်နှင့်မုန့်များကိုလာချပေးသည် ။
သည်လိုချမ်းအေးလှတဲ့ ရာသီမျိုးမှာ လက်ဖက်ရည် သောက်ရသည်မှာလည်း
ခုံမင်စရာကောင်းလှပေသည် ။ အငွေ့ တထောင်းထောင်းထနေသော လက်ဖက်ရည်လေးကို
တစ်ငုံသောက်ရင်း လမ်းမဆီသို့ ငေးကြည့်နေမိသည် ။ မိဘများက သူတို့ရင်သွေးငယ်လေးများကို
လက်တွဲပြီး ကျောင်းသို့ပို့ဆောင်နေသည်ကိုကြည့်ရင်း အမေကို သတိရလာမိသည် ။
အမေ၏စကားသံလေးများကို ပြန်လည်ကြားယောင်လာမိသည် ။
" သားစာကြိုးစားနော် "
" အမေကသားကို ပညာကလွှဲပြီး တစ်ခြားဘာမှမပေးနိုင်ဘူး "
" ဒါကြောင့်သား စာကြိုးစားသင်ပါ ပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင် လုပ်ပါ "
ထိုအတွေးတွေ ပြန်တွေးမိတိုင်း မျက်လုံးအိမ်မှ မျက်ရည်စများရစ်ဝဲ လာသည် ။
" ဟာ သူငယ်ချင်း အစိုင်း စောလှချည်လား "
၀င်းဇော်၏ အသံကြားမှ ထိုးအတွေးများ ပျောက်ကာ အသိပြန်ဝင်လာတော့သည် ။
" အေးပျင်းလို့စောစောထွက်လာခဲ့လိုက်တာ လာထိုင်လေ ၀င်းဇော် "
၀င်းဇော်မှာ ခုံလွတ်တစ်ခုံသို့ ၀င်ထိုင်ရင်း လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မှာလိုက်သည် ။
၀င်းဇော်မှာ အသားညိုပြီး စာပေ၀ါသနာပါသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည် ။ ယခုလည်း လက်ထဲတွင်
စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကိုင်ထားသေးသည် ။ ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ကြည့်မိတော့ " အသားဖြူခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက် " တဲ့
ကျွန်တော်ရယ်ချင်သလိုဖြစ်သွားပြီး ပြုံးစိစိဖြစ်သွားသည် ။ ဒါကို ၀င်းဇော်ရိပ်မိသွားပုံပေါ်သည် ။
" အစိုင်း မင်းဘာတွေရယ်နေတာလဲ "
" ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ စာအုပ်လေးကို သဘောကျလို့ "
" မင်းကသူများကို ဖဲ့ဖို့ဆို ထိပ်ဆုံးကပဲ " ပြောရင်း ၀င်းဇော်မှာ လက်ဖက်ရည်ကိုတစ်ငုံသောက်ရင်း သူ၏စာအုပ်ကို ဆက်ဖတ်နေလေသည် ။
" ၀င်းဇော် မင်းသည်နေ့ ဘယ်သွားမယ် စိတ်ကူးထားလဲ "
" မသိသေးပါဘူးကွာ မင်းကကော် ဘယ်သွားချင်လို့လဲ "
" အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သွားနှပ်နေရင် ကောင်းမလားလို့ အပျင်းပြေပေါ့ကွာ "
" အေး ကောင်းသားပဲ "
မည်မျှပင် မတိုင်ပင်လိုက်ရဘဲ လက်ဖက်ရည်ဖိုးရှင်းကာ ၀င်းဇော်နှင့်အတူ အင်တာနက်ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်သည် ။
ရွာမှာက လူငယ်များအဖို့ အပျင်းပြေ အချိန်ဖြုန်းစရာဆိုလို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့် အင်တာနက်ဆိုင်လေးပဲရှိသည် ။ အင်တာနက်ဆိုင်တောင်မှ မကြာသေးခင်မှ
လာရောက်ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်သည် ။ ဆိုင်ရောက်တော့ လူပင် မရှိသေးပေ ။
၀င်းဇော်နှင့်အတူ တစ်ယောက်တစ်ခုံ ၀င်ထိုင်လိုက်သည် ။ သုံးတက်သည်ဆိုလို့ Gtalk နှင့် Website အနည်းငယ် ကြည့်တတ်ရုံသာရှိသည် ။ Gtalk ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
Invite လုပ်ထားသော အကောင့်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည် ။ Accept လုပ်လိုက်တော့
ထိုအကောင့်ပိုင်ရှင်လေးမှာ Online ပေါ်တွင်ရှိနေလေသည် ။
ဘာရယ်မဟုတ် ထိုအကောင့်ပိုင်ရှင်လေးနှင့် စာအပြန်အလှန်ပို့ရင်း ခင်မင်သွားခဲ့ကြသည် ။ ထိုအကောင့်ပိုင်ရှင်လေးမှာမြို့က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ထက် နှစ်နှစ်ငယ်သည် ။
နာမည်လေးကတော့ " နှင်းစက် " တဲ့တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် စကြနောက်ကျရင်းဖြင့်
ထိုအကောင့်ပိုင်ရှင်လေးနှင့် Chat ရသည်မှာ ပျော်သလိုခံစားလာ ရသည် ။
၀င်းဇော်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကွန်ပျူတာရှေ့ မှာပြုံးပြီး လက်ညိုးတစ်ချောင်းဖြင့် စာရိုက်နေသည်ကိုတွေ့ ရသည် ။ ၀င်းဇော်မှာ ကျွန်တော်ကြည့်နေသည်ကို
သိပုံမရပဲ တစ်ယောက်တည်း အလုပ်ရှုပ်နေသည် ။
နောက်ပိုင်းအလုပ်နားရက်များတွင်လည်း နှင်းစက် နှင့် Online တွင်တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ။ နှင်းစက်ဆီမှ ဓာတ်ပုံလေးလည်းရခဲ့တယ် ။ ရုပ်ရည်ချောမောလှပြီး ချစ်စရာကောင်းသော
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ ။ အခုဆိုလျှင် အားတိုင်း အင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွားကာ နှင်းစက်
အလာကိုစောင့်မျှော်နေတတ်ခဲ့ပြီ ။ အချိန်တွေကြာလာတော့
နှင်းစက်အပေါ်ပိုမိုခင်တွယ်လာခဲ့မိတယ် ။ တစ်ရက်မှာ နှင်းစက်ဆီမှ ဖုန်းနံပါတ်ရခဲ့၍
ကျွန်တော့်မှာ ငါးကြော်ရသော ကြောင်ကဲ့သို့ပင် ပျော်ရွှင်ခဲ့မိတယ် ။
ဖုန်းနံပါတ်ရပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ နှင်းစက် ဆီကို ကျွန်တော် ဖုန်းဆက်လိုက်တယ် ။ ဖုန်းနံပါတ်များကို နှိပ်ရင်းနဲ့ပင် ရင်ခုန်သံတွေ မြန်နေခဲ့တယ် ။ ဖုန်းဝင်သွားပြီး
တစ်ဖက်မှ " ဟဲလို " ဆိုသော အသံကြားတော့ ဒုတိယအကြိမ်
ရင်ခုန်သံတွေ ဆူညံလာခဲ့တယ် ။
" ဟဲလို နှင်းစက် လား " အသံမှာ တုန်ရီစွာနှင့် ထွက်သွားပါသည် ။
" ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်သူလဲမသိဘူးနော် "
" အစိုင်းပါ "
" သြော် အကိုလား ၊ အစိုင်းကို အကိုလို့ပဲခေါ်မယ်နော် "
" ရပါတယ် အဆင်ပြေသလိုသာခေါ်ပါ ၊ အကိုလည်း နှင်းစက်ကိုညီမလေးလို့ပဲခေါ်မယ်နော် "
" ကောင်းသားပဲ "
" ညီမလေး အသံက ကလေးလေးလိုပဲနော် ချစ်စရာလေး "
" ဟွန်း ဟုတ်လည်းဟုတ်ပဲနဲ့ အပိုတွေ "
" အကိုတစ်ကယ်ပြောတာပါ မညာပါဘူး "
" အင်းထားလိုက်ပါတော့ "
" ဘယ်နားမှာသွားထားရမလဲ ညီမလေး မီးဖိုချောင်ထဲလား "
" မီးဖိုချောင်ထဲထားတော့ အိုးမည်းတွေ ပေကုန်မှာပေါ့ "
" ဟား ဟား ဟား " နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူရယ်လိုက်မိသည် ။
" အကိုကပျော်တတ်မဲ့ပုံပဲနော် "
" အင်းပျော်တတ်ပါတယ် "
" အခုအိမ်ပဲလား ညီမလေးက"
" အင်း ဟုတ်တယ် ပျင်းလို့ ကြောင်နဲ့ကြွတ် ကြည့်နေတာ "
" ခိခိ သည်အရွယ်တောင်ရောက်နေပြီ ကာတွန်းကားကြည့်နေတာ မရှက်ဘူးလား "
" ဟွန်း ဘာရှက်စရာရှိလို့လဲ အိမ်မှာဆို ညီမလေးက ကလေးလိုပဲနေတာကို "
" ဟုတ်လား ယုံပါတယ် ကလေးဆိုးကြီးကို "
" ဘာကလေးဆိုးကြီးလဲ ညီမလေးက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက လိမ္မာပြီးသား "
" အကိုစတာပါ သိပါတယ် ညီမလေးက လိမ္မာတယ်ဆိုတာ အဲဒါကြောင့် အကို့ကို အဖြေပေးပါတော့နော် "
တစ်ဖက်မှ အသံမှာ ခဏတိတ်သွားသည် ။
" ဟင် ဘာမှလည်းမဆိုင်ပဲနဲ့ လူလည်ကြီး "
" မဆိုင်ဘူးလို့တော့မပြောလိုက်ပါနဲ့ ညီမလေးရယ် အကိုမခံစားနိုင်တော့လို့ အဖြေပေးပါနော် "
" အပြောကတော့ကောင်းသားနော် ဒါနဲ့ ညီမလေးဆီကို ဘယ်အချိန်မှလာမှာလဲ ဟင်"
" ညီမလေးဆီကို ဖြစ်နိုင်ရင် အခုတောင်ပြေးလာချင်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ညီမလေးနဲ့အကိုတို့က အဝေးကြီးပဲလေ တစ်နေ့တော့ရောက်အောင်လာမှာပါ "
" အင်းညီမလေးစောင့်နေမယ်နော် ညီမလေးလည်း အကို့အပေါ်သံယောဇဉ်ရှိပါတယ် "
" ခွပ် "
" ညီမလေးလည်း အကို့အပေါ်သံယောဇဉ်ရှိပါတယ် " တဲ့ ပျော်လိုက်တာ ။
ပျော်လွန်းအားကြီး၍ ဖုန်းကိုအသာချကာ သတိလက်လွတ် ထခုန်လိုက်မိသည် ။
ဖုန်းစောင့်အန်တီကြီးမှာ လန့်သွား၍လားမသိ ကျွန်တော့်ကို မျက်စောင်းထိုးကြည့်နေသောကြောင့်
ဖုန်းဖိုးရှင်းကာ ဆိုင်ထဲမှ ပျော်ရွှင်စွာ ပြေးထွက်လာလိုက်သည် ။ ရင်လည်းခုန်
ပျော်လည်းပျော်မိသည် ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော့်လောက်ပျော်စရာကောင်းမဲ့သူ
ဘယ်သူများရှိဦးမည်နည်း ။ နောက်ရက်များတွင်လည်း နှင်းစက်နှင့် ဖုန်းမကြာခဏဆိုသလို
ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါသည် ။ အချိန်တွေပြောင်း ရက်တွေနှောင်းတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာ
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အလွန်ချစ်ခဲ့ကြတယ် ။
ညလေးမှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည် ။ ကြယ်ကလေးများမှာလည်း ငွေလမင်းနှင့်အတူ ထွန်းလင်း
တောက်ပနေသည် ။ ရုံးမှပါလာသော စာရင်းအချို့ကို တွက်သာတွက်နေသည် ။ စိတ်များမှာတော့ ဘယ်ဆီမသိလွှင့်မျှောနေမိသည် ။ အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ၏စိတ်များမှာ အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲ
နှင်းစက် ကိုသာ လွမ်းနေမိသည် ။ ခံစားချက်မဲ့နေတဲ့ ကျွန်တော့် နှလုံးသားဟာလည်း
နှင်းစက်နဲ့တွေ့မှ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာပါ ။ အခုဆိုရင်မနက်ဖြန်တိုင်းကို
ရင်ခုန်စွာ ကြိုဆိုနေတတ်ခဲ့ပြီ ။ လူတွေပြောပြောနေတဲ့ " အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဘူး " ဆိုတဲ့
စကားကို ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီ ။ ဟုတ်သည် နှင်းစက်နှင့် ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် အစစ အရာရာ ခြားနားလွန်းလှပေသည် ။
ပြီးတော့ နှင်းစက်က ရွာနှင့် အလွန်ဝေးသော မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ။ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမဲ့လည်း
နှင်းစက်ကို စွဲစွဲလန်းလန်းချစ်ခဲ့မိတယ် ။ ထိုအတွေးများကိုတွေးမိတိုင်း ရင်မောရသည် ။
ထို့ကြောင့် ထိုအတွေးများကို ခေါင်းထဲမှ ထုတ်ကာ စာရင်းကိုဆက်လုပ်နေလိုက်သည် ။ မနက်ဖြန်မှာ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သောကြောင့် စာရင်းများကို ညနက်သည်အထိ လုပ်နေခဲ့လိုက်သည် ။
စာရွက်တစ်ရွက်ကို ကြည့်နေစဉ် ထိုစာရွက်ပေါ်သို့ အနီရောင်သွေးစက် တစ်စက်ကျသွားခဲ့သည် ။
နှာခေါင်းမှ သွေးယိုခြင်းဖြစ်သည် ။ အရင်ကလည်း ဖြစ်နေကြမို့ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ပါ ။ မျက်နှာကို ရေဖြင့်သန့်စင်ကာ ကုတင်ပေါ်တွင် လှဲလျှောင်းနေလိုက်သည် ။ မကြာပါ
သွေးမထွက်တော့သဖြင့် စာရင်းများကိုဆက်လုပ်ကာ မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ယာဝင်ဖြစ်ခဲ့တော့သည် ။
ရာဦဥတု သာယာသော နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည် ။ ညနက်မှ အိပ်ယာဝင်ဖြစ်သော်လည်း စောစောနိုးနေ၍
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့စောစောထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ စားပွဲထိုးကောင်လေးမှာ ခါတိုင်းလိုပင်
ကျွန်တော်သောက်နေကျလက်ဖက်ရည်ကို လာချပေးသည် ။ ၀င်းဇော်လည်းမလာသေးသဖြင့်
လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း သတင်းစာကိုဖတ်နေလိုက်သည် ။ သတင်းစာ တစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာ
" ကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာ " ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ကြည့်လိုက်သည် ။
ရေးထားတာက နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ ကင်ဆာရောဂါ အဖြစ်များလာကြောင်း နှင့် ကင်ဆာရောဂါ အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြသည် ။နှာခါင်းသွေး မကြာခဏယိုတတ်ခြင်းသည်လည်း သွေးကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း ရေးထားသောကြောင့် ကျွန်တော် မှာ အနည်းငယ်တော့
စိတ်လှုပ်ရှားသွားမိသည် ။ ခေါင်းထဲမှာလည်း အသွေးတစ်ခု ၀င်လာသည် ။
" ငါရော သွေးကင်ဆာ ဖြစ်နေပြီများလား မဟုတ်လောက်ပါဘူး ငါအမြဲကျန်းမာနေတာပဲ " လို့
တွေးနေမိစဉ် အနောက်မှ ပခုံးကို လက်ဖြင့် လာရိုက်သောကြောင့် လန့်သွားသည် ။
" ဂွတ်မောနင်း အစိုင်း "
" ဟာလန့်လိုက်တာ ၀င်းဇော်ရာ"
" မင်းက ဘာတွေကို သည်လောက်စိတ်ဝင်စားနေလို့ ငါလာတာကိုတောင်မမြင်ပဲ လန့်နေရတာလဲ "
" ထားပါ မင်းဘာသောက်မလဲ မှာလေ "
၀င်းဇော်မှာ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မှာလိုက်သည် ။
" အစိုင်း မင်းနဲ့ နှင်းစက် အခြေအနေကော် ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲ "
၀င်းဇော်မှာ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်ပဲ ကျွန်တော်နှင့် နှင်းစက်အကြောင်းကိုထမေးသည် ။
ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မဖြေပဲ ပြုံးနေလိုက်သည် ။ ဒါကို ၀င်းဇော်က မကျေနပ်ကာ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို
သတင်းစာဖြင့်လာရိုက်သည် ။ ကျွန်တော်လည်း လက်မြန်သူမို့ သတင်းစာကိုကောက်ယူပြီး ၀င်းဇော်ကို
ပြန်ရိုက်လိုက်သည် ။ ၀င်းဇော်မှာ ကျွန်တော်အား ထပ်ရိုက်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်
" ရှူး ဟိုမှာ ကောင်မလေးတွေ ကြည့်နေတယ် ရှက်စရာကြီး "
ဒါမျိုးကျတော့ သည်ကောင်က ရှက်တတ်သည် ။ သတင်းစာကို ချကာ ကိုယ်အနေအထားကိုပြင်ရင်း
လူကြီးလူကောင်းပုံစံဖြင့် ထိုင်နေသည် ။ ကျွန်တော်မှာ ၀င်းဇော်ကိုကြည့်ရင်း ရယ်ချင်သွားသည် ။
လာ ၀င်းဇော်ကျားထိုးရအောင် ။ ၀င်းဇော်မှာ မငြင်းပဲ ကျားခုံရှေ့သို့ မျက်နှာလှည့်လာသည် ။
" စားတယ် "
" ပြန်စားတယ် "
" - - - - - - - - "
ဘေးနားမှ ၀ိုင်းများကလည်း စိတ်ဝင်စား၍ ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းကိုကြည့်နေကြသည် ။
" ကျားဝင်ပြီကွ " ၀င်းဇော်မှာ ကျားဝင်သွားလေပြီ ။
ကျွန်တော်မှာ သည်ပွဲတွင် ရှုံးရန်သေချာသလောက်ရှိနေပြီ ။ တစ်ကွက်ရှေ့ထပ်တိုးလိုက်သည် ။
" နှစ်ကောင်စားတယ် " ကျွန်တော်မှာ အကောင်တွေကုန်သွား၍ ရှုံးသွားလေပြီ ။ ၀င်းဇော်မှာ အားရ၀မ်းသာစွာဖြင့်
" နိုင်ပြီ " ဟုဆိုကာ ရေနွေးအိုးဖင် မှ အိုးမဲဖြင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို လာသုတ်သည် ။
" အော်သည်လိုကြေးလား တွေ့ကြသေးတာပေါ့ "
နောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုစတင်လိုက်သည် ။ မကြာပါ သုံးလေးပွဲလောက်သာဆော့လိုက်ရပြီး ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး
မျက်နှာမှာ အိုးမည်းများဖြင့် ပေကျံသွားခဲ့သည် ။
" ဟား ဟား ဟား "
တစ်ယောက်မျက်နှာ ကိုတစ်ယောက်ကြည့်ရင်းရယ်နေမိသည် ။ ရှက်လည်း ရှက်သဖြင့် ပိုက်ဆံကို စားပွဲပေါ်တွင် ထားခဲ့ကာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ရင်း ဆိုင်ထဲမှထွက်လာခဲ့လိုက်သည် ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုးပြီး စားပွဲခုံပေါ်ရှိ စာအုပ်ကြားထဲမှ နှင်းစက် ဓါတ်ပုံလေးကို
ထုတ်ယူကြည့်လိုက်သည် ။ နက်မှောင်သော ဆံပင် ၊ ဖြူဖွေးသောအသားအရည် ၊
နှစ်လိုဖွယ် အပြုံးလေးနှင့် ချစ်စရာကောင်းသော နှင်းစက်မှာ ကျွန်တော်၏ စိတ်များကို ချုပ်နှောင်သွားခဲ့ပြီဆိုတာ သိလိုက်ခဲ့ရသည် ။ ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းလေးမှာလည်း
" လှလိုက်တာ ညီမလေးရယ် အပြင်မှာဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင်လှလိုက်မလဲ "
နှင်းစက် ပုံလေးကိုကြည့်ရင်း တစ်ယောက်တည်းပြုံးကာ ပီတိတွေဖြစ်နေမိသည် ။ နှင်းစက်နှင့်လည်း
သည်နေ့ ဖုန်းဆက်စကားပြောခဲ့ရသောကြောင့် ပျော်ရွှင်နေခဲ့မိသည် ။ အပျော်ပင် မဆုံးလိုက် နေ့လည်က
ဖတ်လိုက်ရသော သတင်းစာမှာ ရုတ်တရက်ခေါင်းထဲရောက်လာ၍ မနက်ဖြန်မှာ ဆေးခန်းသွားပြရန်
ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်သည် ။ ဓါတ်ပုံလေးကို စာအုပ်ကြားထဲမှာ ပြန်ညှပ်ထားလိုက်ရင်း အိပ်ယာထက်သို့
ဆေးခန်းအတွင်းရှိ ခုံတန်းရည်လေးမှာ ထိုင်ရင်း ဆေးစစ်ချက်အဖြေကို ရင်ထိတ်စွာ စောင့်မျှော်နေလိုက်သည် ။
မကြာပါ ဆရာဝန်မှာ အခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီး ဆေးစစ်ချက်အဖြေ စာရွက်စာတမ်းများ ကို ကျွန်တော့်အားပေး၍
ဆရာဝန်က ပြောလိုက်သည် ။
" ကောင်လေး မင်းမှာ သွေးကင်ဆာရှိနေပြီ အလွန်ဆုံး ခြောက်လလောက်ပဲနေရတော့မယ်
ဆရာဝန်မှာပြောရင်း ကျွန်တော့်ရှေ့မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည် ။
ဆရာဝန်ပြောသွားသော စကားသံများကို နားထဲမှာ ထပ်ကာထပ်ကာကြားနေမိသည် ။
မထင်မှတ်ထားသော စကားများကိုကြားလိုက်ရ၍လည်း ဘာတစ်ခွန်းမှပြန်မပြောနိုင်ပဲ
ထိုနေရာမှာပင် အတန်ကြာရပ်နေလိုက်မိသည် ။
" ဖူးးးးးးးးးး ငါသေလို့မဖြစ်သေးဘူး ငါအရမ်းချစ်ရတဲ့ ငါ့ညီမလေးကို သွားတွေ့ရဦးမယ် "
ညလေးမှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက် ----------
နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ည (၁၁) နာရီပင်ကျော်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ခုအချိန်ထိ
အိပ်မပျော်နိုင်သေးဘဲ အတွေးပေါင်းများစွာနှင့်ပင် စိတ်များမှာ မွန်းကြပ်နေရသည် ။
" ငါ ဟာ သည်လောကကြီးမှာ ခဏလေးပဲ နေရတော့မဲ့ လူတစ်ယောက်ပါလား
လောကကြီးကမတရားဘူး ဘာလို့ ငါ့ကို သေမင်းထံမြန်မြန်ဆွဲခေါ်နေရတာလဲ "
ကုတင်အနီးရှိ စားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသော ဆေးစစ်ချက်စာရွက်များကို လုံးချေ၍ အခန်းနံရံဆီသို့
ပစ်ပေါက်လိုက်သည် ။ ကျွန်တော်၏ စိတ်များမှာလည်း စားပွဲပေါ်တွင် ထွန်းထားသည့် ဖယောင်းတိုင်မီး
ကဲ့သို့ပင် ပူလောင်နေမိသည် ။ အိမ်ဝင်းအတွင်းရှိ မြက်ခင်းပေါ်တွင် ထိုင်၍ ကောင်းကင်ရှိ
ကြယ်ကလေးများကို စိတ်ပြေလက်ပျောက် ထိုင်ကြည့်နေမိသည် ။
" သိပ်လှတဲ့ကြယ်ကလေးတွေပါလား ငါ့ညီမလေးက ကြယ်တွေဆို သိပ်ချစ်တာ
ငါသာကြယ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လိုက်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ " လို့တွေးနေမိသည် ။
အတွေးများမဆုံးခင်မှာပင် ကျွန်တော်သိပ်တွေ့ချင်သော နှင်းစက်မှာ အဖြူရောင် ဂါဝန်လေးကို
၀တ်ဆင်ထားပြီး ခြံဝင်းအ၀တွင်ရပ်၍ ကျွန်တော့် အားလှမ်းခေါ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
" အကို ညီမလေးသည်မှာလေ - - - ညီမလေးဆီလာခဲ့ပါလား "
နှစ်လိုဖွယ်အပြုံးလေးနှင့် ခေါ်နေသည့် ညီမလေးမှာ ကျွန်တော်ထင်ထားသည်ထက်ကိုပင် ပိုပြီး
ချစ်စရာကောင်းနေသည် ။ ညီမလေးကကော မြို့ကနေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သည်ကိုရောက်လာပါလိမ့် ။
ကျွန်တော့်မှာ အံ့သြလွန်းလှသဖြင့် အချိန်အတော်ကြာမှင်သက်နေမိသည် ။ ပျော်လည်းအရမ်းပျော်မိသည် ။
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အပျော်ဆုံးအချိန်ဆိုလျှင်လည်းမမှားပေ ။ ကျွန်တော်လည်း ညီမလေးရှိရာဆီသို့
သွက်လက်သောခြေလှမ်းလေးများဖြင့် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်စွာပြေးသွားလိုက်သည် ။ ညီမလေးဆီသို့
ရောက်ဖို့ သုံးလှမ်းအလိုလောက်တွင် ညီမလေးမှာ ပျောက်ကောင်းမလှ ပျောက်သွားခဲ့လေသည် ။
" ညီမလေး ... ညီမလေး ... ညီမလေး "
အော်သံနှင့် အတူ လန့်နိုးလာပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် ထထိုင်လိုက်မိသည် ။
အော်သံနှင့်အတူ ကုတင်ပေါ်တွင် ထထိုင်လိုက်မိသည် ။ ငါအိပ်မက် မက်နေပါလားလို့ သိလိုက်ရတော့မှ
သက်ပြင်းချနိုင်တော့သည် ။ ညကဘယ်ချိန်အိပ်ပျော်သွားမှန်းကိုမသိလိုက် နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့
နံနက်(၁၀) နာရီပင်ကျော်နေပြီ ။ အိပ်ယာများသိမ်းပြီး အိမ်နောက်ဖေးတွင် မျက်နှာသစ်နေစဉ် နှာခေါင်းမှ
သွေးစက်အချို့ ကျဆင်းလာသည်ကို သတိထားမိလိုက်သည် ။ ထိုသွေးစက်များက ကျွန်တော်၏ စိတ်ကို
ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစေသည် ။ ထိုစဉ် အိမ်ရှေ့မှ သူငယ်ချင်း ၀င်းဇော်၏ ခေါ်သံကို ကြားလိုက်ရသည် ။
" အစိုင်း … အစိုင်း "
၀င်းဇော်၏ ခေါ်သံကြောင့် သွေးများကို ရေဖြင့်လျှင်မြန်စွာ ဆေးကြောပစ်လိုက်သည် ။ ကျွန်တော့် သွေးကင်ဆာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ၀င်းဇော်အားမသိစေလိုပေ ။
" အေး သူငယ်ချင်း ငါအိမ်နောက်မှာကွ "
" အစိုင်း မင်းကိုငါ လက်ဖက်ရည်သွားသောက်ဖို့လာခေါ်တာ "
" အင်း ...... ကောင်းသားပဲ ........ သွားမယ်လေ "
မျက်နှာသစ်ပြီး ၀င်းဇော်နှင့် အတူ ရွာထိပ်ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည် ။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် လာချပေးသော ကော်ဖီကိုတစ်မော့သောက်ရင်း
" ငါမနေ့ညက အိပ်မက်မကောင်းဘူးကွာ "
" လာပြန်ပြီ မင်းညီမလေး နှင်းစက် အကြောင်းပဲမလား "
" ဟာ .... ၀င်းဇော်မင်းသိလှချည်လား "
" သိတာပေါ့ဟ မင်းစိတ်ထဲမှာ နှင်းစက်ကလွှဲပြီး ဘာများရှိသေးလို့လဲ "
၀င်းဇော်ပြောသည်မှာလည်း ဟုတ်သောကြောင့် ကျွန်တော်ဘာမျှပြန်မပြောလိုပေ ။
" ဒါနဲ့ အစိုင်း မင်း နှင်းစက်ကို မြို့မှာ တစ်ကယ်သွားတွေ့ မလို့လား "
" အင်းသွားတွေ့မလို့ (၂) လပိုင်းကုန်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် "
" ဟုတ်မှလည်း လုပ်ပါကွာ အစိုင်း ရာ မင်းကမြို့ကိုလည်းတစ်ခါမှ ရောက်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး ။
မြို့ဆိုတာက ငါတို့ရွာလို မဟုတ်ဘူး အကျယ်ကြီးပဲ အဲဒါ မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီး နှင်းစက်ကို သွားတွေ့မှာလဲ "
" မတက်နိုင်ဘူးကွာ ငါမဖြစ်မနေ သွားကိုတွေ့ရမယ် ငါနှင်းစက်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ မင်းလဲ
သိရဲ့သားနဲ့ ၀င်းဇော်ရာ "
၀င်းဇော်မှာ ကျွန်တော်၏ ခံစားချက်ကိုသိနေသည့်အတွက် သက်ပြင်းသာချ၍ ဘာမှပြန်မပြောတော့ပေ ။
အချိန်တွေဟာ ကုန်မြန်လွန်းလှသည် ။ ပြက္ခဒိန်တွေလည်း တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက်ကုန်ဆုံးသွားရာမှ
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ နှစ်လပိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့လေပြီ ။
မိုးစင်စင်ပင်မလင်းသေး ။ နှင်းများလည်း တဖွဲဖွဲကျဆင်းနေသောကြောင့် အရာရာတိုင်းမှာ မှုန်ဝါးဝါး
ပင်ရှိနေသေးသည် ။ မြို့ကိုသွားမည့်ကားဂိတ်လေးဆီသို့ ၀င်းဇော်နှင့်အတူ
ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့သည် ။ ရာသီဥတုကအေးနေပေမဲ့လည်း ခြေလှမ်းများမှာ တက်ကြွနေမိသည် ။
၀င်းဇော်မှာ ကျွန်တော့်အား ရွာထိပ်ရှိ ကားဂိတ်လေးဆီသို့ လိုက်ပို့ပေး၍
" အစိုင်း မင်း အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေကွာ မြို့ကိုရောက်လို့အဆင်မပြေတာရှိရင် ရွာကိုဖုန်းဆက်ခဲ့လိုက်နော် "
၀င်းဇော်မှာ ၀မ်းနည်းနေပုံရသည် ။ ၀မ်းနည်းမယ်ဆိုရင်လည်း ၀မ်းနည်းစရာပင် ။ ရွာမှာက
တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို တစ်ယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ညီအကို အရင်းသဖွယ်
နေလာခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား ။ အခုလိုခွဲခွာရမည်ဆိုတော့ ၀မ်းမနည်းပဲနေမည်လား ။
" အေးပါ ၀င်းဇော်ရာ ငါ့အတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ "
" အင်းဒါဆိုလည်း ကားပေါ်တက်တော့လေ ကားထွက်တော့မယ် "
ကျွန်တော်လည်း ၀င်းဇော်ကို နှုတ်ဆက်၍ ကားပေါ်တွင် ထိုင်နေလိုက်သည် ။
ခဏကြာတော့ မှန်လုံကားလေးမှာ ဖြေးညင်းစွာထွက်ခွာသွားပြီး ကျွန်တော်တို့ရွာကလေးကို ကျောခိုင်းခဲ့သည် ။
၀င်းဇော်လည်း လက်ပြရင်း ဟိုးအဝေးမှာ ကျန်ခဲ့လေပြီ ။ တစ်ရွေ့ရွေ့နှင့် ကျန်နေခဲ့သော သစ်ပင်လေးများမှာလည်းလွမ်းစရာပင် ။ သည်လို ရွာကလေးနှင့်ခွဲခွာသွားရတော့လည်း
စိတ်မကောင်းပေ ။ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချကာ ထိုင်ခုံအမှီပေါ်သို့ ခေါင်းလေးကို လှဲချလိုက်ပြီး
မျက်လုံးများကို မှိတ်ပစ်ထားလိုက်သည် ။ ကားလေးမှာလည်း တအိအိနှင့် နှင်းစက် ရှိရာမြို့လေးသို့ ထွက်ခွာသွားနေပြီ ။ ဘယ်အချိန်ကတည်းက အိပ်ပျော်သွားသည်ကိုမသိလိုက်
ဆူညံသံများ ကြား၍ မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မြို့ကိုပင်ရောက်နေလေပြီ ။
အချိန်မှာလည်း နေအတော်ပင်စောင်းနေပြီ ဖြစ်သည် ။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး
Taxi ဌားကာ တည်းခိုခန်းတစ်ခုဆီသို့ မောင်းခိုင်းလိုက်သည် ။ ကားလေးမှာ မာကြူရီ မီးများဖြင့်
လင်းထိန်နေသော တိုက်တာနေအိမ်များကို ဖြတ်သန်းပြီး ညီညာပြန့်ပြူးသော
ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တရှိန်ထိုး ပြေးလွားနေသည် ။ မြို့၏ အလှများကြောင့်လား ၊
ဒါမှမဟုတ် နှင်းစက်နှင့်တွေ့ရမှာကြောင့်လားမသိ စိတ်များမှာ အလွန်လှုပ်ရှားနေမိသည် ။
ခဏကြာတော့ ကားလေးမှာ တည်းခိုခန်းတစ်ခုရှေ့သို့ ထိုးရပ်သွားသည် ။ တည်းခိုခန်းရောက်တော့ ရေမိုးချိုးပြီး
ပြတင်းပေါက်မှာရပ်၍ လေညင်းခံနေလိုက်သည် ။ ကျွန်တော်ရသော အခန်းမှာ သုံးထပ်မြောက်မှာဖြစ်၍
အပေါ်ကနေကြည့်လျှင် မြို့၏အလှများကို ကောင်းစွာမြင်နေရသည် ။
တန်ဖိုးကြီးကြွေပြားများဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားပြီး မိုးပေါ်သို့ထိုးထောင်နေသော တိုက်ကြီးများ ၊
အရောင်အသွေးမျိုးစုံနှင့် ပေတစ်ရာလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ပြေးလွှားနေသော မော်တော်ကားများ၊
ဟိုးအဝေးတစ်နေရာမှာတော့ ရွှေရောင်တ၀င်းဝင်းနှင့် စေတီတော်ကြီး၊
ဟိုငေးသည်ငေးနှင့် တစ်နေရာအရောက်တွင်တော့ မျက်လုံးများမှာ ရပ်တန့်သွားပြီး ရင်ခုန်သံများမှာလည်း
စည်းချက်မမှန်တော့ချေ ။ လူစည်ကားသော ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်
ကောင်မလေးတစ်ယောက်တို့ ထိုင်နေသော စားပွဲဝိုင်းလေးဆီသို့ အကြည့်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်သည် ။
ထိုကောင်မလေးမှာ နှင်းစက် နှင့် အလွန်တူနေသော ကြောင့်ဖြစ်သည် ။ " နှင်းစက် လားမသိဘူး "
ဟုစိတ်ထဲမှာရေရွှတ်ရင်း သွားကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး အောက်ထပ်သို့ ပြေးဆင်းသွားလိုက်သည် ။
ထိုဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ ထိုကောင်လေးနှင့် ကောင်မလေးတို့မှာ မရှိတော့ချေ ။ မတွေ့သည့်အဆုံး
လက်လျှော့ကာ " ငါအမြင်မှားတာ နေမှာပါ " လို့ဖြေသိမ့်ရင်း တည်းခိုခန်းဆီသို့ပြန်လာ အနားယူလိုက်တော့သည် ။
နေမင်းကြီးမှာ သူ၏တစ်နေ့တာ တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန် အတွက် တောင်တန်းများကြားမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့လေပြီ ။ နေမင်း၏အလင်းရောင်မှာ ကောင်းကင်မှ ဖြာကျလာပြီး
ပြတင်းမှန်ကိုဖြတ်ကာ မျက်နှာပေါ်သို့ ကျရောက်လာသည် ။ မျက်လုံးကိုဖွင့်၍
နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ၇ခွဲရှိနေပြီ ။ သည်နေ့ညီမလေး နှင်းစက် နှင့်သွားတွေ့ရမည်
ဖြစ်သော ကြောင့် စိတ်များမှာ လန်းဆန်းတက်ကြွနေမိသည် ။ ရင်ခုန်သံများလည်း မြန်နေသည် ။
ရက်လများစွာ စောင့်ခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာ ကျွန်တော်ချစ်ရသော ညီမလေး နှင်းစက်ကိုတွေ့ရတော့မည်
မဟုတ်ပါလား ။ ရေမိုးချိုးပြီး မှန်ရှေ့တွင် အချိန်အတော်ကြာအလှပြင်နေမိသည် ။ နှင်းစက်နှင့် ပထမဆုံး
သွားတွေ့ရမှာမို့လို့လည်း စိတ်များမှာ မလုံမလဲဖြစ်နေသည် ။ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုကာမှ ရွာမှ ပါလာသော
လွယ်အိတ်လေးကို လွယ်လျက် တည်းခိုခန်းမှထွက်လာခဲ့လိုက်သည် ။ ခြေလှမ်းများရဲ့ဦးတည်ရာကတော့
နှင်းစက်ဆီပေါ့ ။ လမ်းပေါ်ရောက်တော့ Taxi တစ်စီးဌားကာ ဈေးသို့ထွက်လာလိုက်သည် ။ ကားတွင်းမှ
သီချင်းသံလေးများမှာလည်း ကြည်နူးစရာပင် ။ သီချင်းများကိုနားထောင်ရင်း ရင်တွေပိုခုန်လာသလို
ခံစားလာရသည် ။ ရှေ့တစ်လမ်းတွင် ဈေးရောက်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်
" ကားဆရာရှေ့နားလေးမှာ ဆင်းမယ် "
ကားဆရာမှာ လမ်းဘေးတွင် ကားကို ရပ်ပေးလိုက်သည် ။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ကားခပေး၍ ဈေးထဲသို့ ၀င်သွားလိုက်သည် ။ ဈေးအတွင်းမှာတော့ ပစ္စည်းများအတော်စုံလှသည် ။ တစ်ခါမှလည်း သည်လိုမျိုးစည်ကားတာကိုမမြင်ဖူး ။ ဟိုငေးသည်ငေးနှင့် လျှောက်လာခဲ့ရာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့တွင်တော့
ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းများမှာ ရပ်တန့်သွားခဲ့သည် ။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းတဲ့
Fancy ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့မှာပါ ။ ထိုဆိုင်ထဲက အမွေးပွပွလေးနှင့် ချစ်စရာကောင်းသော
အရုပ်လေးများက ထိုဆိုင်ရှေ့က မခွာနိုင်အောင် ကျွန်တော် ၏ စိတ်များကို ဆွဲဆောင်ထားလေသည် ။
" အရုပ်လေးတွေက သိပ်လှပါလား
နှင်းစက် အတွက် လက်ဆောင်ဝယ်သွားချင်လိုက်တာ "
ပိုက်ဆံ အိတ်ကပ်လေးကို လက်ဖြင့် တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်သည် ။ ပိုက်ဆံအတော်လေးတော့ကျန်သေးသည် ။ ဒါကြောင့် နှင်းစက် အတွက်
အရုပ်ကလေးဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ ထို့နောက်မှာတော့ အရုပ်ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်ရန်
ခြေလှမ်းများကို လှုပ်ရှားလိုက်စဉ် မထင်မှတ်ထားသော အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသည် ။
" နှင်းစက် ပါလား " ပါးစပ်မှ တိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်မိသည် ။ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပင်
ချက်ချင်း အုတ်နံရံဆီသို့ပြေးပုန်းနေလိုက်သည် ။ ဆိုင်ထဲမှ လက်တွဲပြီး ထွက်လာသော
ထိုအတွဲမှာတော့ ကျွန်တော့်ကို သတိထားမိပုံမရချေ ။ အုတ်နံရံကို ကွယ်၍ ထိုအတွဲလေးကိုချောင်းကြည့်လိုက်စဉ်မှာတော့ ကျွန်တော် ၏ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးမှာ ပေါက်ကွဲလုမတက်
၀ုန်းဒိုင်းကြဲသွားခဲ့သည် ။ ထိုအတွဲမှ ကောင်မလေးမှာ နှင်းစက်ဆိုတာ
သေချာသွားခဲ့လေပြီ ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလည်း လဲကျမတက် အားအင်တွေ ဆုတ်ယုတ်သွားခဲ့သည် ။ အမြင်တွေမှာလည်းေ၀၀ါးလာခဲ့သည် ။ မျက်ဝန်းတစ်လျှောက်မှာ မျက်ရည်ဥလေးတွေက
တွယ်ကပ်နေခဲ့ပြီကိုး ။ ပုခုံးထက်မှ လွယ်အိတ်ကြိုးလေးကို တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး
အားတင်းထားကာမှ မျက်ရည်ဥလေးများမှာ ပါးပြင်ထက်သို့ ခုန်ဆင်းသွားခဲ့သည် ။
" အပြင်မှာ ပိုလို့တောင်ချောနေပါလား ညီမလေးရယ် ......
ညီမလေးမှာ ချစ်သူရှိလျက်နှင့် ဘာကြောင့် အကို့ကို မျှော်လင့်ချက်တွေပေးခဲ့ရတာလဲ ။
ဘာကြောင့် လှည့်စားခဲ့ရတာလဲ "
စိတ်ထဲမှာသာ အော်ပြောနေမိသည် ။ ဆိုင်ထဲမှာ ထွက်သွားသော နှင်းစက်တို့အတွဲမှာလည်း မျက်ဝန်းထဲမှ
တစ်စတစ်စ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေသည် ။ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းနည်းခြင်းများစွာဖြင့် ထိုဆိုင်လေးကို ကျောခိုင်းထွက်ခွာ လာခဲ့လိုက်သည် ။
ထိုညလေးမှာတော့ ၀မ်းနည်းမှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သည် ။ လမင်းကြီးမရှိ၍ ကောင်းကင်တစ်ခွင်မှာ မည်းမှောင်နေသည် ။ ကြယ်ကလေးများမှာလည်း ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို သနားလို့လားမသိ
ထွက်မလာဘဲ ပုန်းနေကြသည် ။ ယောကျာင်္းဖြစ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့တယ်ပဲပြောပြော အခန်းထဲမှာ
အရက်ကိုအဖော်ပြုရင်း အဲသည်ညကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ် ။ အရက်ကို တစ်ငုံသောက်လိုက်သည် ။
လည်ချောင်းထဲမှာ ပူဆင်းသွားသည် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက အပူလောက်တော့
ပူမည်မထင် ။ ထိုအချိန်မှာ ဘယ်နေရာက ဖွင့်မှန်းမသိသော သီချင်းသံအချို့က နားထဲသို့ ပျံလွင့်လာခဲ့သည် ။
" နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ..... ရှေ့တိုးမိတယ်
မေ့ပျောက်ဖို့ ကြိုးစားမှ ..... ပိုမိုကာသတိရမိ "
သီချင်းသံလေးမှာ သာယာသလောက် အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ကို လှောင်နေသလိုပင် ။
မျက်ရည်တစ်ချို့က ပါးပြင်ပေါ်သို့ လိမ့်ဆင်းသွားပြန်သည် ။ နောက်တစ်ခွက် သောက်လိုက်သည် ။
လည်ချောင်းထဲမှာ ပူဆင်းသွားပြန်သည် ။ သောက်ရင်း သောက်ရင်း ဘယ်နှစ်ခွက်ရှိသွားမှန်းတောင်
မသိတော့ပေ ။ ခဏကြာတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပေါ့ပါးလာပြီး လေထဲမှာ ရောက်နေသလိုခံစားလာရသည် ။
အရာရာတိုင်းမှာလည်း ဝေေ၀၀ါးဝါး ဖြစ်လာတော့သည် ။ စားပွဲကိုထောက်၍ အားယူကာ
ကြိုးစားထလိုက်သည် ။ မူမမှန်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် လျှောက်ကာ ကုတင်ပေါ်သို့
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပစ်လှဲချလိုက်သည် ။ ခေါင်းတွေကရည်ဝေနေပါသော်လည်း
နှင်းစက် ၏ အတွေးပုံရိပ်များကတော့ စိုးမိုးထားဆဲပင် ။
မျက်လုံးကို မှိတ်ထားလိုက်သည် ။ ဒါပေမဲ့မရ အမြင်အာရုံမှာ နှင်းစက်၏ ပုံရိပ်များက ဆက်လက်နေရာယူထားဆဲ ။ အစွဲအလန်းကြီးမှုတွေ ၊ လူတွေအပေါ်ယုံကြည်လွယ်သော
စိတ်တွေကြောင့် အချစ်နွံထဲမှာ နစ်မြုပ်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လား ။
အရင်အချိန်တုန်းက ဘယ်လိုပျော်ရွှင်မှုတွေ ၊ ရင်ခုန်ခြင်းတွေပဲ ရှိခဲ့ရှိခဲ့ အခုတော့ အရာအားလုံးဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ ။ မြို့မှာလည်း ဆက်မနေချင်တော့သဖြင့်
နောက်တစ်ရက်မှာပဲ ၀မ်းနည်းခြင်းများစွာနှင့် အတူ ရွာကလေးသို့ ပြန်ခဲ့လိုက်တယ် ။
ရွာရောက်တော့ ကားပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည် ။ ရွာလေးမှာ အရင်းအတိုင်း သာယာစွာတည်ရှိနေဆဲပင် ။ လူပင်ပန်းသည်ထက် စိတ်ပင်ပန်းသည်မှာ ပိုခံစားရခက်သည် ။ စိတ်ဓါတ်တွေလည်း အကြီးအကျယ်
ကျနေမိသည် ။ ကြိုသူမရှိသော ရွာလေးထဲသို့ လေးတွဲ့သောခြေလှမ်းများဖြင့်
ဘာလိုလိုနဲ့ မြို့ကပြန်ရောက်လာတာ (၆) ရက်ပင်ရှိခဲ့ပြီ ။ သည်နေ့လည်း ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည် ။ အရင်နေ့များလို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လည်းမသွားချင်သောကြောင့် အခန်းတွင်းမှာပဲ
အောင်းနေလိုက်သည် ။ မကြာပါ ၀င်းဇော်မှာ ရောက်လာပါတော့သည် ။
" အစိုင်း ....... အစိုင်း
ဟာ သည်ကောင်အစောကြီး ဘယ်တွေသွားနေမှန်းမသိဘူး "
အခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်သည် ။
" ဟာ အစိုင်းလိုက်ရှာလိုက်ရတာကွာ ငါထင်တာမင်းများမရှိဘူးလားလို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားရအောင်လေ "
" ငါသည်နေ့ နေလို့သိပ်မကောင်းလို့မသွားတော့ဘူးထင်တယ် "
" အေး မင်းမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား အစိုင်း ဆေးကော်သောက်ပြီးပြီလား ငါသွားဝယ်ပေးမယ်လေ "
" ရပါတယ် ၀င်းဇော်ရာ ခေါင်းနည်းနည်းလေး ကိုက်ရုံတင်ပါ "
" အင်းပြီးတာပဲလေ ငါလည်းသွားစရာရှိလို့ ညမှ လာခဲ့မယ် ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ဦးနော် "
" အေး ငါအဆင်ပြေပါတယ် "
မကြာပါ နောက်တစ်ပတ်လောက်တွင် ကျွန်တော်အိပ်ယာထဲတွင် လဲပါတော့သည် ။ အခုလည်း ၀င်းဇော်မှာ ဆရာဝန် ခေါ်လာကာ ဆေးတစ်ချောင်းထိုး ပြီးခဲ့ပြီ ။
" ဆရာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ "
၀င်းဇော်မှာ အခန်းတွင်းမှ ထွက်လာသောဆရာဝန်အားမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။
" အင်းကြည့်ရတာ စိတ်အတော်ထိခိုက်ထားပုံရတယ် "
" ဟုတ်တယ် ဆရာ ရုံးမှာလည်း အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲ အမြဲတမ်းမှိုင်နေတယ် "
" သူလောကကြီးမှာ သိပ်မနေရတော့ဘူးထင်တယ် "
ဆရာဝန်မှာဖြေညင်းစွာပြောလိုက်ပေမဲ့ ၀င်းဇော်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ တုန်ခါသွားခဲ့သည် ။
" ဗျာ ဆရာ ဘာပြောလိုက်တယ် "
" ဟုတ်တယ် မင်းသူငယ်ချင်းမှာ သွေးကင်ဆာရောဂါရှိနေတာကြာပြီ အခုစိတ်ပါ ထိခိုက်ထားတော့
ရောဂါအခြေအနေက အတော်ကို ဆိုးနေပြီ "
ဆရာဝန်မှာ ပြောပြီး ထွက်ခွာသွားလေပြီ ။ ၀င်းဇော်မှာ ထပ်မံအံ့သြသွားရပြန်သည် ။ အစိုင်းမှာ
သွေးကင်ဆာရှိသည်တဲ့လား ငါ့ကိုတောင် တစ်ခါမှ မပြောဖူးပါလား ။
၀င်းဇော်မှာ အခန်းထဲသို့ ၀င်လာပြီး ကျွန်တော့် ကုတင်ဘေးမှာ လာထိုင်တယ် ။
" အစိုင်း မင်းနေရထိုင်ရသက်သာရဲ့လား "
ကျွန်တော်ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ပေ ။ အပေါ်ရှိ မျက်နှာကြတ် ကိုသာ စူးစိုက်စွာ ကြည့်နေမိသည် ။
၀င်းဇော်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်မိတော့ ၀င်းဇော်မှာ မျက်နှာမကောင်း မျက်ဝန်းများမှာလည်း
မျက်ရည်စ အချို့ကို တွေ့ရသည် ။ ၀င်းဇော်မှာ ကျွန်တော့်အခြေအနေကို သိသွားခဲ့ပြီလား ။
၀င်းဇော် ခံစားတာကို ကျွန်တော်မမြင်ရက်ပေ ။ ထို့ကြောင့် ……
" ၀င်းဇော် ငါသက်သာပါတယ် အခုငါ တစ်ယောက်တည်းနေချင်လို့ ကျေးဇူးပြုပြီး အပြင်ထွက်ပေးပါလား "
၀င်းဇော်မှာ ဘာမှပြန်မပြောဘဲ အခန်းအပြင်ဘက်သို့ ထွက်သွားခဲ့သည် ။
" ငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ၀င်းဇော်ရာ ငါ့ကြောင့် မင်းပါ စိတ်တွေပင်ပန်းနေရပြီ ငါတောင်းပန်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရာ " မျက်ရည်အချို့က ပါးပြင်ပေါ်သို့ကျလာသည် ။
ညလေးမှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိပြီး လ၏ အလင်းရောင်ဖြင့် အရာရာတိုင်းမှာ သာယာလှပနေသည် ။
ကောင်းကင်တစ်ခွင်မှာလည်း ငွေစင်ကြယ်လေးများမှာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့် ပျော်မြူးစွာ ခုန်ပေါက်နေကြသည် သွေးကင်ဆာဆိုသည့် ရောဂါ ဝေဒနာကိုခံစားနေရသော
ကျွန်တာ့်မှာတော့ ထိုအလှအပများကို မမြင်နိုင်တော့ချေ ။ ကျွန်တော် အမြဲအားကျ
နှစ်သက်ခုံမင်ခဲ့သော ကြယ်ကလေးများကိုတော့ အနီးရှိ ထရံပေါက်လေးများမှ မြင်တွေ့နေရသေးသည် ။
ထိုသို့မြင်တွေ့ရခြင်းမှာလည်း နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။
ကြယ်ကလေးများကို ငေးကြည့်ရင်း ညီမလေးပြောခဲ့သော စကားများကို
" အကို ညညဆို အိမ်အပြင်ဘက်ကို ထွက်ကြည့်ပါလား ... ကြယ်ကလေးတွေက အရမ်းလှတာ "
ထိုအကြောင်းများကို ပြန်တွေးမိတိုင်း နှလုံးသားမှာ နာကျင်ခံစားရပြန်သည် ။ ကြယ်ကလေးများကိုကြည့်နေရာမှ
မျက်လုံးများမှာေ၀၀ါးလာပြီး ပါးပြင်ပေါ်သို့ မျက်ရည်ပေါက်လေးများ လိမ့်ဆင်းသွားခဲ့သည် ။
" အဟွပ် ...... အဟွပ် "
ကုတင်အနီးရှိ စားပွဲခုံပေါ်တွင် ထောင်ထားသော ညီမလေး ဓါတ်ပုံကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး ဓါတ်ပုံကို အတန်ကြာစိုက်ကြည့်ကာ
ဓါတ်ပုံထဲမှ ချောမွေ့နေသော ညီမလေးရဲ့ ပါးပြင်ကို လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်လိုက်မိသည် ။
" ရက်စက်လိုက်တာ ညီမလေးရယ် "
" အကို ကညီမလေးကို သိပ်ချစ်ခဲ့တာ အပြင်မှာမတွေ့ခဲ့ဖူးပေမဲ့ အပြင်ကလူတွေထက်တောင် ညီမလေးကို ပိုချစ်နေခဲ့မိတယ် တစ်နေ့မှာ အပြင်မှာဆုံမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ ဘ၀ကိုကြိုးစားရင်း
ညီမလေးဆီကို အကိုလာခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အကိုထင်သလို တစ်ခုမှ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး
ဒါပေမဲ့ ညီမလေးအစား အိပ်မက်လေးတွေပဲ အကို့ဆီ ရောက်လာခဲ့တယ် ။
အိပ်မက်ထဲမှာ ညီမလေးနဲ့အကို စကားတွေပြောကြတယ် ။ မြူမှုန်တွေကြားမှာ နှစ်ယောက်သား ပြေးလွှားရင်း
မမောမပန်းဆော့ကစားခဲ့ကြတယ် ။ စမ်းချောင်းဘေးမှာလည်း နှစ်ဦးသား တိတ်တဆိတ်ထိုင်ရင်း ရေထဲမှာ လွတ်လပ်စွာ ကူးခတ်နေကြတဲ့ ငါးတွေကို ငေးကြည့်ခဲ့ကြတယ် ။ အိပ်မက်ထဲမှာ လွင့်မျှောနေပေမဲ့
အကိုပျော်တယ် သိလား ညီမလေး "
" အဟွပ် ..... အဟွပ် .... အဟွပ် "
ချောင်းအရမ်းဆိုးကာ အနေခက်လာသဖြင့် လောကကြီးမှာနေရမဲ့အချိန်က သိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရသည် ။ ချောင်းဆိုးရင်း ပါးစပ်ထဲမှ သွေးအချို့တို့
အန်ထွက်လာခဲ့သည် ။ နှာခေါင်းထဲမှလည်း သွေးစက်များ ကျဆင်းလာသည် ။
" အဟွပ် ... အဟွပ် .... အဟွပ် "
အတန်ကြာတော့ ချောင်းဆိုးသံမှာ ပျောက်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာ ငြိမ်သက်သွားပါတော့သည် ။
ကုတင်ပေါ်မှ အားယူပြီး ကြိုးစားထလိုက်သည် ။
ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်း၍ အခန်းပြင်သို့ ထွက်မည်အပြု အနောက်ဘက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မိသည် ။
ညီမလေး နှင်းစက် ဓါတ်ပုံကို တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ထာဝရ အိပ်စက်အနားယူသွားပြီဖြစ်သော
ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ အသက်ကင်းမဲ့နေသော ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်လေးကို
ပြုံးကာကြည့်ရင်း နှေးကွေးသော ခြေလှမ်းများဖြင့် အခန်းပြင်ဘက်ဆီသို့ ကျွန်တော့်ဝိဥာဉ်လေးမှာ
ထွက်ခွာသွားပါတော့သည် ။ ညီမလေးရှိရာအရပ်ဆီကိုပေါ့ ................
Ebook (မြန်မာလို) (6)
Online မှာ ဓာတ်ပုံပြင်ရန်ဆိုဒ်များ (1)
ရင်းတွင်းဖြစ် ၀တ္တုရှည် (1)
♥♥♥ နည်းပညာဆိုဒ်များ ♥♥♥
ဖုန်းထဲမှာ Virus တွေကြောက်ကြောက်နေသူများအတွက် Virus ကာကွယ်မယ့် - CM Security Antivirus 4.6.3 APK
DVDFab UHD Creator Giveaway License
Lin Thant Oo
Professional System & Networking Service
# Photoshop Cs3 အသုံးပြုနည်း(မြန်မာလို) #
ဦးအောင်နိုင်မော် ရဲ့ Adobe Photoshop Cs3 အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးပါ။ အခြေခံကစပြီးရှင်းပြထားပါတယ် ။ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်း...
ဘ၀ဆိုတာခဏလေးပါ ....... လူ့ဘ၀မှာနေခွင့်ရတဲ့ အချိန်လေးဟာ ခဏလေးပါပဲ ...... ရေခဲတုံးလေးတွေကို ထိုင်နေတဲ့ လူပုံစံသွန်းထားပြီး လေဟာပြင်မှာ...
♥♥♥ ဟာသပုံလေးများ(၇) ♥♥♥
တစ်နေ့တစ်နေ့ ပင်ပန်းသမျှ သည်ဟာသပုံလေးတွေကိုကြည့်ရင်း အမော ပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေ ။ နေတတ်ရင်လော ကကြီးဟာပျော်စရာကောင်းပါတယ် ။ အမြဲတမ်းပြုံးနေတာ...
နေ့တိုင်းမြင်ရ မင်းအလှကို ရင်မှာမြတ်နိုး တိတ်တခိုးနဲ့ ချစ်ခဲ့မိ၏ မင်းရဲ့အပြုံး မင်းမျက်လုံးက ငါ၏ရင်ဍ္ဍ် မေ့မရအောင် စွဲလန်းမိ၏ နူးညံ့သိမ်မေ...
♥♥ ဟာသပုံလေးများ(၈) ♥♥
ရယ်မောခြင်းသည် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စေနိုင် ရယ်မောခြင်းဟာ သွေးဖိအားကို လျော့ကျ ...
# အထီးကျန် ကဗျာတစ်ပုဒ် #
တစ်နေ့နေ့မှာ ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားက ဒဏ်ရာတွေပဲ ပေးတတ်တယ်ဆိုတာကို သိခဲ့ရင် အမုန်းဆိုတဲ့ တံတိုင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကြိုတင်ကာက...
** အိပ်မရသောည **
အလွမ်းရဲ့ည ကောင်းကင်ယံမှာ သတိရခြင်း မိုးတိမ်တွေက အုံ့မှိုင်းနေ၏ ။ မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ ငွေလမင်းလည်း ခရီးလွန်ကာ ထွက်မလာပဲ ပျောက်နေရှာ၏ ။ ချစ်ေ...
♥♥ အတုယူစရာ ပုံပြင်များ(၁) ♥♥
(၁) အတွေ့အကြုံက ရသော အသိြ ခင်္သေရယ် ၊မြည်းရယ် ၊မြေခွေးရယ် မိတ်ဆွေဖြစ်ကြပြီး အစာရှာထွက်ခဲ့ကြသတဲ့ ။ အမဲတစ်ကောင်ကိုရတဲ့အခါ ခြင်္သေ့က မြည်းကိ...
♣♣ ၀က်ခြံ အကြောင်းသိကောင်းစရာ ♣♣
၀က်ခြံဖြစ်ခြင်း ၀က်ခြံ အဓိက ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် မွေးညှင်းပေါက်လေးများ ပိတ်ဆို့ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အဆီအိတ်ဂလင်း များမှ ထုတ်လ...
# AL Show Player #
သည် player ကတော့တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ် ။ Video Format အကုန်လုံးနီးပါးလောက်ကိုသည် Player နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ Flash game တွေကစ သည် Player ...
အိပ်မက်ကောင်းကင်. Powered by Blogger.
အိပ်မက်ကောင်းကင် © 2012 | Designed by Online Games, in collaboration with Game Coupons, Combat Trousers and Online Dating